उत्तर कोरियाली शासक किमकी पत्नी सात महिनादेखि बेपत्ता, कतै . – ZoomNP
उत्तर कोरियाली शासक किमकी पत्नी सात महिनादेखि बेपत्ता, कतै . प्रकाशित मिति: शनिवार, कार्तिक २०, २०७३ समय - १३:३७:२२ एजेन्सी । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनकी पत्नी ‘री सोल जू’ सात महिनादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएपछि अनेकन अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राय पतिसँगै देखिने जू’को सात महिनादेखि कुनै अत्तोपत्तो नहुँदा विश्वभर चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ । यस विषयमा पश्चिमी मिडियाहरुले तीन किसिमका अड्कलबाजी गरिरहेका छन् ।
यसमध्ये सबैभन्दा बलियो मत उनी गर्भवती छिन् भन्नेमा छ । डेलिमेलले उनी गर्भवती रहेको चर्चालाई प्राथमिकता दिँदै खबर प्रकाशित गरेको छ । यस्तै अन्य कैयन चर्चित मिडियाहरुमा कतै किम र जूबीच सम्बन्ध बिग्रिएको र उनलाई हिरासतमा राखिएको त होइन भन्ने आसयका खबरहरु प्रकाशित भएका छन् ।
तेस्रो अड्कल भने किमकी बहिनी यो जोङसँग सम्बन्ध बिग्रिएकाले किमले पत्नीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा कम महत्व दिएको भन्ने छ । बहिनी यो जोङ किमकी सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र हुन् । २९ वर्षीय जोङले प्रोपोगाण्डासहित किमका महत्वपूर्ण एजेण्डा ह्याण्डिल गर्छिन् । उनलाई किम पछिको उत्तराधिकारीका रुपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । सोही कारण किम बहिनीसँगको सम्बन्धलाई निकै महत्व दिन्छन् ।
जे होस्, किमकी पत्नीको साथ केही न केही त पक्कै भएको छ । गर्भवती नै भएको हुनसक्ने धेरैको अड्कल छ ।
यद्यपी सामान्य शंका र असमझदारीमा आफ्नै नातेदार र नजिकका मानिसलाई मारिदिन पछि नपर्ने किमले कतै आफ्नै पत्नीको साथ पनि केही नराम्रो त गरेनन् भन्ने आशंकालाई पनि नकार्न सकिँदैन । स्मरण रहोस्, उनले फुपाजूसहित आफ्ना कैयन विश्वास पात्रलाई मृत्युदण्ड दिइसकेका छन् ।